31 | October | 2014 | Danya Wadi
ဗမာပြည်လာတော့မယ့်အကြောင်းဗမာထိပ်သီး နှစ်ဦး ထံ အိုဘားမား ဖုန်း ဆက်
By danyawadi October 31, 2014 Leaveacomment
အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက်ဟူစိန် အိုဘားမား ဟာ မနေ့ကပဲ မြန်မာသမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ နှစ်ဦးလုံးဆီကို ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေ၊ နိုင်ငံ ရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၊ နောက်လာတော့မယ့် ရွေးကောက်ပွဲ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း စဉ် တွေအကြောင်း စတာတွေကို ဖုန်း ဆက်ပြီး ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတ အိုဘားမား ဟာ ရက်သတ္တနှစ်ပတ်အတွင်း နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတော့မှာဖြစ်တဲ့ အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးညီလာခံကို တက်ရောက်ဖို့ နဲ့ မြန်မာပြည် ဒုတိယအကြိမ် အလည်အပတ်ခရီးစဉ် အဖြစ် လာရောက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ President Obama yesterday spoke by telephone to both President […]
အိုဘားမားကဦးသိန်းစိန်နှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ထံ ဖုန်းဖြင့် ဆက် သွယ် ဆွေးနွေး
Fri, 2014-10-31 14:39 Photo – MSNBC အမေရိကန် သမ္မတ ဘာရတ်အိုဘားမားက မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (ဒီချုပ်) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ထံ ဖုန်းဆက်ပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက် ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း အိမ်ဖြူတော်က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ အိုဘားမားသည် အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို တယ်လီဖုန်းနှင့် ဆက်သွယ် စကားပြောခဲ့ပြီး ရေတိုကာလ တစ်ခုအတွင်း အလုံးစုံ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘော တူညီမှု ရရှိအောင် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်နှင့် ၁၃ ရက်များတွင် အာဆီယံအစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာမည့် အိုဘားမားက […]
see more the link see more the link
Obama urges Myanmar leader to address rights of Rohingya Muslim minority
Posted on October 31, 2014 by admin — Burma Times: 31 Oct 2014 WASHINGTON (REUTERS) – President Barack Obama urged Myanmar leader Thein Sein inatelephone call on Thursday to take additional steps to address ethnic tensions in the country and support the civil and political rights of the stateless Rohingya Muslims minority. The […]
နေပြည်တော် နိုင်ငံရေး ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ ရလဒ် မထွက်
ဧရာဝတီ ယနေ့ မနက် နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော နိုင်ငံရေး ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲမှ မည်သည့် ရလဒ်မျှ မထွက်ခဲ့ဘဲ တက်ရောက်သူများက ၎င်းတို့ ကိုယ်စားပြုသော အဖွဲ့အစည်းများ ၏ နိုင်ငံရေး မျှော်မှန်းချက်များကိုသာ ပြောဆိုခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကမူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ သဘောထားမဟုတ်ဘဲ ပုဂ္ဂလိက သဘောဆန္ဒကို တင်ပြဆွေးနွေးကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲအပြီး ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ပြောသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မည်သည့်အကြောင်း အရာ ဆွေးနွေးသည်ကို မေးမြန်းရာ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲ တိုက်ရိုက်မေးပါ”ဟု ပြန်လည် ဖြေကြားသည်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကမူ ၁) လက်ရှိပြုပြင်ပြောင်းရေးကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်မည်ဟု၎င်း ၂) နောက်အစိုးရမပြောင်းခင် အပစ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်ချုပ်ခြင်းဖြင့် ပြည်တွင်းငြိမ်း ချမ်းရေး ကို ခိုင်မာစေမည်ဟု၎င်း […]
Aung San Suu Kyi meets with Burma’s president in milestone talks
Former military commander Thein Sein greets political rival as Barack Obama, soon to visit, calls for fair election in 2015 Burma’s president, Thein Sein, shakes hands with opposition leader Aung San Suu Kyi before their meeting in the capital, Naypyidaw. Photograph: Lynn Bo Bo/EPA Burma’s president, Thein Sein, has opened unprecedented talks with Aung San […]
တောင်ကိုရီးယားဇတ်လမ်းတွဲများကြည့်မှု၊ခြစားမှု တို့ဖြင့် အရာရှိ (၁၀) ဦး ကို ကင်ဂျုံအန် ကွပ်မျက်
တောင်ကိုရီးယား ဇတ်လမ်းတွဲများကြည့်ရှုမှု၊ ခြစားမှုတို့ဖြင့် အလုပ်သမားပါတီမှ အကြီးတန်းအရာရှိ ဆယ်ဦးခန့်ကို ကွပ်မျက်ခြင်းဖြင့် သေဆုံးသွားပြီးဖြစ်သော ဦးလေးဖြစ်သူ၏ ကျန်ရှိနေသော သြဇာကို မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်က ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း တောင်ကိုရီးယား ဥပဒေပြု အမတ်၏ လက်ထောက်တစ်ဦးက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။ ကွပ်မျက်ရေးတပ်ဖွဲဖြင့် ပစ်ခတ်ကွပ်မျက်မှုမှာ ကင်ဂျုံအန်၏ နောက်ဆုံးအကျော့ သန့်စင်မှု ဖြစ်သည်ဟု တောင်ကိုရီးယား အဏာရပါတီ Saenuri Party မှ ဥပဒေပြုအမတ် လီချီအိုလ်ဝူး၏ လက်ထောက်တစ်ဦးဖြစ်သူ လင်ဒယ်ဆောင်က ပြောကြားခဲ့သည်။ လီချီအိုလ်ဝူးသည် အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်က ဆိုးလ်မြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အမျိုးသား ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့၏ ရှင်းလင်းတင်ပြပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ကွပ်မျက်ခံရသည့် အရာရှိများမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့် မည်သည့်အချိန်တွင် ကွပ်မျက်ကြောင်းကိုမူ လီက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပေ။ Ref: Bloomberg